IVFနည်းလမ်းမှ တစ်ဆင့် ကိုယ်ဝန်ရှိစေသည့် အကြောင်းရင်းများ။ ကုသမှု အောင်မြင်ခြင်းမှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအပြင် အခြားသော အချက်သုံးခုအပေါ်တွင်လည်း မူတည်နေသည်။
1. အထူးကုဆရာဝန်များသည် ကိုယ်ဝန်မရရှိခြင်းကို ကုသရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပြီး သားဖွားဆေးပညာတွင် အတွေ့အကြုံမများအပြား ရှိကြပါသည်။
2. သန္ဓေသား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတွင် များစွာ ကျွမ်းကျင်သော ဓာတ်ခွဲခန်း သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့
3. နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများဖြင့် လက်ခံထားသော အဆင့်မြင့် သန္ဓေသားနည်းပညာ Advanced Embryological Technology)
ကုသရေးလုပ်ငန်းစဥ်တစ်လျှောက် အခြားဘေးထွက် ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ ကျန်းမာသော ကလေးရလာစေရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်မရခြင်းကို ကုသမှုရာတွင် အောင်မြင်မှုရခြင်း၌ ပါဝင်ပတ်သက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော အချက်အလက်များတွင် မိခင်၏ အသက်၊ အမိမျိုးဥ၏ အရည်အသွေး၊ မျိုးဥတစ်ခါကြွေလျှင် ပေါ်ထွက်သော အမိမျိုးဥ အရေအတွက်၊ အဖမျိုးစေ့ အရည်အသွေး၊ သားအိမ်အမြှေး၏ အနေအထားတို့ ပါဝင်သည်။
IVF နည်းလမ်းအတွက် သင်၏ ကျန်းမာရေးကို ပြင်ဆင်သည့်အခါတွင် BDMS Wellness Clinc သည် ဤအရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါသည်။ IVF နည်းလမ်းအောင်မြင်မှုကို ဖြစ်စေသော အချက်များကို ထိန်းချုပ်သည့် အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဥ်များကို ဧည့်သည် စိတ်‌တိုင်းကျ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် သီးသန့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် ကျမ်းကျင် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၊ ပြီးပြည့်စုံသော အနေအထားများကို ဖန်တီးရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းချုပ်ရေး အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဓာတ်ခွဲခန်းက စံပြုအပ်သော ကုသမှုများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။
အောင်မြင်မှု ရရှိစေသော အကြောင်းရင်းများ
ငယ်ရွယ်သော အမျိုးသမီးများနှင့် ယှဥ်လိုက်လျှင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အမျိုးသမီးများသည် အမိ မျိုးဥ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်းတို့ ကြုံရလေ့ရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ခြင်းသည်လည်း အသက်အရွယ်နှင့် သက်ဆိုင်နေပါသည်။ အသက်အရွယ်မှာ အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဆို သည့် သဘောမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဇနီးမောင်နှံများအနေဖြင့် ယုံကြည်ရသော ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အကြံဉာဏ်ယူသင့်ပါသည်။
2. ယခင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးခြင်း
ယခင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးခြင်းသည်လည်း အောင်မြင်သော IVF ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရေးကြီး အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ယခင်က အထိအခိုက်မရှိ၊ ကလေးပျက်ကျခြင်းမရှိဘဲ အောင်မြင်စွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည်ဆိုလျှင် အောင်မြင်နိုင်ချေများပါသည်။
3. မျိုးအောင်ခြင်း ပြဿနာများ
ကလေးမရခြင်းမှာ အမျိုးသားဘက်မှရော၊ အမျိုးသမီးဘက်မှပါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သားအိမ်နှင့် သားအိမ်မြှေးပြဿနာများ၊ ထို့အပြင် IVF နည်းလမ်း အောင်မြင်နိုင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အမျိုးသားဘက်မှ အခြားသော အချက်များ။
4. အစာအိမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အလေ့အထများ
IVF နည်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု အောင်မြင်နိုင်မှု များပြားရန်ဆိုလျှင် ဆေးလိပ်သောက်တတ်သော အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် IVF ကုသရေးနည်းလမ်းကို ခံယူခြင်းမပြုမီ သုံးလအလိုကတည်းကပင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူများမှာ မျိုးဥကြွေခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသော ဆေးပေးရာတွင် ပိုပြင်းသော ဆေးများပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်သူများနှင့် ယှဥ်လိုက်လျှင် သေန္ဓသားလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း နိမ့်ပါးကြောင်း လေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဆိုပါသည်။
4.2 ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်
အဝလွန်ခြင်းမှာလည်း IVF ကုသမှုကို အဟန့်အတား‌ဖြစ်စေသည့် အခြားသော အကြောင်းအရင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်သော၊ ကိုယ်အလွန်ချိန်များလွန်းနေသော အမျိုးသမီးများမှာ ကလေးမရနိုင်ချေများပြီး၊ ကလေးပျက်ကျနိုင်ချေများပြားသည်။ ထို့အတူ ပုံမှန် ခံန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရှိသူများနှင့် ယှဥ်လိုက်လျှင် IVF ကုထုံး အောင်မြင်နိုင်ချေ နည်းပါးပါသည်။
5. ဆေးခန်း၏ အရည်အသွေး
IVF ကုထုံးကို ခံယူရန်အတွက် ကုသရေးဌာနကို ရွေးချယ်ခြင်းမှာ အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဆေးခန်းရှိ သင်ကြားလေ့ကျင့်၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်များပြားသော ဆရာဝန်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊
ဆေးပညာရှင်များမှာလည်း အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေပါသည်။